Yakapedzisira kugadziridzwa musi wa02 / 26/2020
Kazhinji, kudzima madhairekitori kuri nekukurumidza kana aine hunyoro hwenzvimbo diki-diki nemafayira. Asi kana madhairekitori ane zvivakwa zvakaomarara, zvinosanganisira mazana kana zviuru zvezana-madiki madhairekitori uye mafaera, zvinogona kutora maminitsi akati wandei kana maawa akawanda kuti udzime. Mutsetse wekuraira, nepamusoro nepamusoro wepamusoro, unogona kubvisa madhairekitori akaomesesa muchidimbu chenguva iyoyo, dzimwe nguva anotorwa kunge ari 20 times kana kupfuura nekukurumidza kupfuura yetsika yekutsvagisa sarudzo. Iri gwaro rinoratidza maitiro ekuomesa kudzima madhairekitori makuru uchishandisa mabatch maficha kana tambo yekuraira uchishandisa native Windows mirairo uye zvishandiso. Chikamu chekuwedzera chinofukidza Maharaware eGUI mapurogiramu ekubvisa ayo ane chikamu cheCLI. Iko kusimbiswa kwegwaro iri kuri munzira dzekukurumidza dzekubvisa uye kwete pane dzakachengeteka kana dzechigarire nzira dzekudzima dzinoshandiswa kuita mafaera kuti asawanikwe. Nzira dzakachengeteka dzekubvisa ndeimwe nyaya uye dzinononoka sezvo dzichisanganisira kunyora mafaira, kazhinji vachishandisa akawanda apfuura.
Kuputika kunogona kunonoka zvakanyanya kana kudzima madhairekitori nekuti inoverengera saizi folda, huwandu hwezvinhu zviri mu folda, uye inofungidzirwa kupedza nguva usati wagadziriswa, uye zvinorehwa pamusoro pezvinhu zvakabviswa, zvasara zvabviswa, kubviswa izvozvi, uye panguva yekutarisa nekutaurira chero kukakavara panguva yekugadzirisa. Maitiro aya achiri kushanda kunyange kana bhandi rekudzokorodza rachisunungurwa kana kana mafaera nemafolda abviswa zvakananga vachishandisa Shift + Del. Kushandisa tambo yekuraira kunobvisa pamusoro uyu, zvichikonzera kukurumidza kudzima maitiro. Ramba uchifunga kuti nekukurumidza zvinoreva hukama neyakajairwa kudzima maitiro, saka kubvisa maGigabytes akati wandei mafaera uye madhairekitori angangotora nguva yakakosha yenguva. Semuenzaniso, bvunzo dzakaitwa ne SuperUser Nhengo yakawana kuti zvakatora pakati makumi mashanu nemakumi mashanu maminitsi kudzima 53 GB inosanganisira mafaira 28.3 mune mafaera 1,159,211 uchishandisa nzira yekumhanyisa yekuraira mutsetse wakaedzwa (musanganiswa weDZ uye RMDIR mirairo). Kana mafaera nemaforodha achizodzimwa pane imwe nguva, pamwe nzira inomhanyisa ndeyekuvachengetera chikamu chakatsaurwa uye wozoisa fomu racho kubvisa zvese.
Kunyangwe iyo RMDIR yekuraira inogona kubvisa dhairekitori uye mafaera ayo, iri zvishoma zvishoma kupfuura kushandisa iyo DEL uye RMDIR mirairo mune maviri-nhanho maitiro. Iyo DEL command inobvisa mafaera, uye iyo RMDIR yekuraira inobvisa dhairekitori.
Mabasa senge yekutanga yekubvisa mafaera uye zvakaburitswa nul kuti udzivise pamusoro pekunyorera kune skrini
2nd pass inobvisa dhairekitori renzvimbo
/ f - Kumanikidza bvisa kuverenga-mafaera chete
/ q - Quiet maitiro, usabvunze kudzima
/ s - Sanganisira subdirectories
Imwe nzira yekudzima mafaera efolda ndeye RoboCopy. Iyo yekuenda folda inotariswa kubva pane isina chinhu dhairekitori, iyo inomanikidza RoboCopy kudzima chero mafaera asiri mune rekunongedza dhairekitori.
Iwo wekutanga mirairo RoboCopy kudzima mafaera ese mune inoenda dhairekitori:
/ MIR - Mirror dhairekitori
/ Eta - Yakatemerwa Nguva
RoboCopy inoshanda nedhairekitori uye seti yemafaira mukati mekutengesa zvinopesana nefaira rimwe. Mumuenzaniso batch mafaira uchishandisa RoboCopy, RMDIR ichiri kushandiswa kubvisa iyo yenguva pfupi dhata dhairekitori uye demo rekuenda kwemubereki, uye DEL inoshandiswa mukubvisa mafaera.
Uchishandisa Batch Mafaira
Batch mafaira, kusanganisira mafaera emuenzaniso pazasi, anogona kushandiswa kubva kumutsara wekuraira (nemamirimita), kubva pane yekutumira-kune dhairekitori, kurudyi-nyorodha mamiriro menyu, kana nekukwevera nekudonhedza (nzira iri nyore).
Iwo ma batch mafaera anogona kuitwa kubva kune Windows raira kukurumidza nemaparameter, kana kuwedzerwa kunzira yezvakatipoteredza kuti zvive nyore.
Kuita kubva pakudaira kwekuraira, vhura idzva cmd nekukurumidza, famba uchienda kunzvimbo yehavha yebhechi uye uise zita rayo yakazara, kana pinda iyo batch faira yakazara nzira. Ive neshuwa yekuwedzera madhairekitori uye / kana mafaira kudzima sema paramitha. Sanganisira makotesheni akatenderedza chero nzira yefaira ine nzvimbo:
Ex. "C: Chirongwa Filesdelete_file_folder_fast_simple_v2.bat" "C: Folder kana faira kudzima"
Kuparadzanisa akawanda ma parameter ane nzvimbo pakati pematanho.
Kuwedzera batch faira folda kune iyo Windows nharaunda inoshandura inobvumira kuti iwanikwe kubva kune chero cmd kukurumidza pasina kuenda kune iyo batch faira nzvimbo kana kunyora iyo yakazara nzira. Kuwedzera batch faira nzira yeiyo Windows nharaunda kushandisa:
tanga–> Dhijitari Panel-> Sisitimu-> Yepamberi masisitimu masisitimu -> Yepamberi Tab-> Nzvimbo Dzakasiyana-> Sisitimu Dzinoshanduka-> Nzira-> Hora
Wedzera nzira semuenzaniso,; C: nzira kune batchfile; kusvika kumagumo (usakanganwa iyo semicolons imwechete pakutanga uye kumagumo). Ridza OK katatu.
Dzvanya-kurudyi Kwemenyu menyu
Iyi sarudzo inobvumira mushandisi kurudyi-nyora dhaira uye sarudza batch faira kubva pane pop-up menyu. Matanho ekugonesa izvi ndeaya:
Chindai WINDOWS KEY + R kuvhura iyo Run dialog bhokisi
Pinda regedit uye tinya ENTER
Kungofa-kona pakero yeyero yeganda. Sarudza Nyowani> Kiyi
Isa zita: Delete & Fast wobva wadzvanya ENTER
Kungofa-kurudyi pane Delete & Fast folda yakagadzirwa, uye sarudza Nyowani> Kiyi
Pinda "command" uye tinya ENTER.
Kuruboshwe-tinya pane yero command kiyi yakagadzirwa. Dzvanya kaviri kupinda (Default) yekupinda.
Mundima yeVeruzi dhata, isa iyo batch faira yekushandisa, semuenzaniso, cmd / c ”C: Path todelete_file_folder_fast_simple_v2.bat”% 1 ″ wobva wadzvanya OK
Imwe nzira yekuzadzisa zviri pamusoro ndeye kushandisa refa faira. Kopa kodhi iri pazasi, isa pasire mugadziri refaira uye uichengete se "Delete Fast.reg". Dzvanya kaviri faira kuti ubatanidze zvirimo kune registry uye kurudyi-pinda menyu rakagadzirira kushandisa.
Windows Registry Mhariri Shanduro 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellDelete & Fastcommand] @ = "cmd / c" C: Nzira todelete_file_folder_fast_simple_v2.bat "% 1"
Tumira kune Directory
Imwe sarudzo ndeye kutumira kune dhairekitori, Ingo gadzira nzira pfupi uye uwedzere kune yakakodzera dhairekitori:
Yezvitsva zvitsva zve Windows, iyo kutumira kune dhairekitori iri pa:
Ye XP, nzvimbo yacho ndeiyi:
Kuti ushandise, kurudyi tinya faira kana dhairekitori uye wosarudza iyo batch faira kubva kuKutumira kune menyu.
Vachikweva uye Drop
Nzira iri nyore yekushandisa muenzaniso batch mafaera ndeyekungodhonza nekudonhedza mafolda kana mafaera pavari. Hapana mafaera kana maforodha anozobviswa pasina kusimbiswa kwemushandisi.
Misiyano muMuenzaniso Batch Files
Dele_files_folders_fast_v2.bat - inonyora akawanda mafaera uye maforita kuti abviswe, dhairekitori yevabereki, mashoma folda / faira hunhu, uye neruzivo ruzivo rwakakwana pamazita nenhamba dzemafaira uye maforodha akadzimwa. Inosanganisirawo kubuda kunonoka, kubvumira mafaera uye mafolda kubvisa ruzivo kuti rwuongororwe hwindo risati ravhara (default 10 masekondi).
Dele_file_folder_fast_simple_v2.bat - kugumira pakubvisa faira rimwe chete kana demo rimwe chete panguva. Izvo hazvipe hukama hwakawanda kana mhinduro kunze kwekungobvunza mushandisi kana vachinyatsoda kudzima faira rakaratidzwa kana folda. Zvinobuda nekuzvinyima mushure mekudzima faira kana folda.
Dele_files_folders_fast_robocopy_v3.bat - kunyanya yakafanana Dele_file_folder_fast_simple_v2.bat kunze kwekunge icho RoboCopy chakabudiswa chinoratidzwa panguva yekuuraya uye mushure mekugadzirisa mafaera. Faera rechikwata rakamiswa mushure mekuitwa richibvumira mushandisi kuona mhedzisiro pasina kubuda. Zvakagadziridzwa 01-29-20.
Dele_files_folders_fast_robocopy_silent_v3.bat -Akanyanya kufanana sepamusoro pekuti kunze kwekubuditsa kwaRoboCopy HAZVINONYONESESWA kuurayiwa nekukasira. Faira re batch rinobuda nekukasira mushure mekunonoka kwemasekondi gumi. Yakawedzerwa 10-01-29.
Dele_file_folder_fast_simple_robocopy_v2.bat - kungoiswa pakudzima faira rimwe chete kana demo rimwe chete panguva.Isa RoboCopy pane iyo DEL yekudzima zvinyorwa zvemukati. RoboCopy inoburitswa inoendeswa kune nul kubvisa kuburitsa kwemirairo. Zvinobuda nekuzvinyima mushure mekudzima faira kana folda.
Dele_file_folder_fast_byenow_v1.bat -Inoshandisa command line program byenow kudzima folda uye ese mafaera ayo uye Subdirectories.Uses byenow's default magadzirirwo. Batch faira rinomira pamusoro pekupedza.
Dele_file_folder_fast_byenow_ntapi_v1.bat -Inoshandisa command line program byenow kudzima folda uye ese mafaera ayo uye anogovera. Zvakafanana neyekare batch faira asi inoshandisa -delete-ntapi sarudzo. Batch faira rinomira pamusoro pekupedza.
Iyo batch mafaera anogona kutumidzwa zita uye achashanda zvakafanana.
Semuenzaniso Batch Files uchishandisa DEL, RMDIR, uye RoboCopy
Kuruboshwe-kuridza kuti uone iyo faira pawindow yazvino, kana shandisa kurudyi-kudzora uye "Sunga Chibatanidza Sezvo" kurodha.Mabhatani mafaira anoshandurwa kubva pane dzakapfuura shanduro se / S switch inononoka kuita kana uchibvisa mafaera. Iyo / S switch ichiri kushandiswa, asi chete kune mafolda.
Cherechedza: Bvisa iyo ".txt" yekuwedzera usati washandisa.
Iyo batch mafaira pazasi anongoshandisa chete RMDIR uye DEL mirairo.
Tarira: Iko kune faira yakanyudzwa mukati meiyi positi, ndapota shanyira iyi post kuti utore iyo faira.
Iwo ari pazasi batch mafaera anoshandisa RoboCopy kudzima mafaera maforodha, RMDIR kudzima mafoira asina chinhu, uye DEL kudzima mafaera ega. Kana RoboCopy yakaiswa asi isina kuiswa mu Windows nharaunda nzira, ive shuwa yekushandura iyo nzira yeRoboCopy yeako system mune batch faira (usakanganwa kubvisa iyo REM kuti ikwanise iyo). Hapana shanduko kumabatch mafaira anodiwa kana RoboCopy yatove kuiswa uye yakaiswa munzira. Kuti utarise, nyora "robocopy: mune yekuraira Prompt. Kana RoboCopy ikateedzera, yatove kuiswa uye inosanganisirwa munzira yenzvimbo.
Mahara Ekubvisa Zvishandiso
Huwandu hweGUI neyemutemo mutsara faira uye folda yekudzima zvishandiso zviripo, asi zvakanyanya kutarisa pane zvakachengetedzwa kubviswa uye haupi sarudzo yekubviswa kwakajairwa. Izvo zvemahara zvinoshandiswa zvinowanikwa pasi apa zvinokwanisa kuita zvese zvakadzivirirwa uye zvakadzivirirwa kubviswa kubva kuGUI uye kubva kumutsara wekuraira.
Aya maGUI-akavakirwa maturusi anoshanda kubva kumutsara wekurayira kungave kuburikidza nekutanga kunogadziriswa kwekushandisa akapatsanurwa murairo mutsara zvinopa. Mukana wekushandisa zvishandiso izvi pane kushandisa zvekuno windows mirairo yakaita seRMDIR uye DEL ndeyekuti zviri nyore kugadzira sarudzo dzekubvisa dzakadai sekubvisa mafaera kana maforodha zvichienderana nekushandurwa kana zuva rekusika, saizi, kana mhando, pamwe nekunyora matanda, tumira maitiro kumashure, kuseta otomatiki system shutdowns, kusabvisa / kusanganisa mafaera akasarudzika uye maforodha, mira pazvikanganiso, uye isa dzimwe sarudzo dzakawanda uchishandisa tambo imwe yekuraira.
Fast Copy ikopi / backup utility iyo inogonawo kuita yakajairwa uye isina kudzivirirwa yakabviswa pane mamwe mafaera nemafolda. Inogona kuiswa sechirongwa chenguva dzose kana sechirongwa chinotakurika nekusarudza dhiri panguva yekuisa. Chirongwa ichi chinogamuchirwa zvakare chinogamuchira mirairo kubva kumutsara wekuraira.
Mafaira uye maforodha anogona kudonhedzwa uye kudhonzwa kuenda kune iyo interface kumisikidza sosi kana kwekuenda madhairekitori. Kubva pane Sarudzo menyu, chirongwa ichi chinogona kumisikidzwa kuti chiise Shell extensions kuti ikwanise FastCopy kudzima, kuteedzera, kana kufambisa mafaera / maforodha uchishandisa kurudyi kurudyi menyu. Windows Explorer
FastCopy Delete Sarudzo
FastCopy Shell Kuwedzerwa Sarudzo
FastCopy Command mutsara uye Batch Faira
Rondedzero ye FastCopy's command mutsara sarudzo inogona kuwanikwa online rubatsiro peji uye mufaira rekushandisa. Fair yebhatani iri pazasi yakagadzirirwa kudzima mafaera uye maforodha vachishandisa dhiri uye kudonha nemhando mbiri: (1) Usakumbire kusimbiswa usati wabvisa uye nekukanganisa kudhonza matanda, uye (2) Bvunza simbiso usati wabvisa uye ugokwanisa kuisa matanda. Faera rechikwata rinomira mushure mekuurayiwa. Faera re batch rakagadzirirwa kushandiswa kuisa inotakurika yekuisirwa.
Kuputswa kweye yekutanga FastCopy yekuraira mutsara (hapana kusimbiswa, hapana kutemwa kwemuti):
FastCopy.exe / cmd = bvisa / kwete_confirm_del / log = FALSE / auto_close% *
/ cmd = bvisa - bvisa mirairo
/ no_confirm_del - Usatendeke usati wabvisa
/ log = FALSE - Disable kunyorera oparesheni / kukanganisa ruzivo kune iyo faira regi
/ auto_close - Vhara otomatiki mushure mekuurayiwa kwapera pasina zvikanganiso
% * - Yese yakadhonzwa uye yakadonhedza mafaera uye mafolda
Semuenzaniso Batch Faira yeiyo FastCopy (bvisa .txt kuwedzera usati washandisa):
Kurumidza Folder Eraser Pro
Kurumidza Folder Eraser Pro chirongwa chakaiswa chefreeware. Iyo inogona kuita ese akajairwa uye akachengetedzeka kudzima zvese kubva kumutsara wekuraira kana kubva paGUI interface. Iyo yekumira mutsara wekutungamira mutsara unowanikwa mune yekuraira-mutsara folda iyo ine maviri CLI executables, 32-bit shanduro uye 64-bit shanduro.
Ichi chiishandiswa chakanyatsogadzirirwa kubvisa madhairekitori uye iwo ari pasi-mafolda uye mafaera ari mukati mavo. Kusiyana neFurCopy, haikwanise kudzima mafaera ari ega nesurname, asi inokwanisa kudzima mafaira ari ega kana mapoka maererano nehukuru, misi, uye zvimwe mafirita, uye inogona kuisa kunze kwemafaira uchishandisa wildcards. Kunyangwe folda nemafaera zvinogona kudhonzwa zvakananga ndokukandwa pane iyo GUI interface yekubvisa, kuongororwa kwakaratidza kuti kana faira rakadonhedzwa paGUI, chirongwa ichi chakadzimawo faira rimwe nerimwe uye faira mukati mawo dhairekitori rakafanana nefaira rakadonhedzwa. Pakanga pasina nyaya nemafolda akadonhedzwa paGUI kana kubviswa uchishandisa iyo CLI inotakurika. Iyo CLI inoburitswa haigone kudzima mafaera ega uye inogadzira chikanganiso kana iyo yega yefaira nzira ichishandiswa pamwe nechero rekudaira.
Kuenzaniswa ne FastCopy, iyo nhamba yekuraira mutsara sarudzo inosarudzika. Semuenzaniso, hapana sarudzo iripo yekugonesa kana kudzima kusimbiswa usati wabvisa faira, saka sarudzo yekusimbisa inofanirwa kuve yakagadzirirwa mune batch script uchishandisa Windows mirairo kuti uwane uku kushanda.
Kurumidza Folder Eraser Pro Interface
Fast Folder Eraser Pro Delete Sarudzo
Fast Folder Eraser Pro Command mutsara uye Batch File
Iyo faira yekubatsira yeiyo inomira CLI inogadziriswa inowanikwa mune yekurayira-mutsara folda pamwe chete nemaateru maviri, iyo 32-bit CLI inoshanda, FFECmd32.exe, uye iyo 64-bit inotonga, FFECmd64.exe. Iyo batch faira pazasi yakarongedzwa kudhonza uye kudonha uchishandisa iyo 32-bit inogadziriswa, inosanganisira kusimbisa isati yabviswa, uye kumbomira mushure mekuurayiwa .. Kusiyana ne FastCopy uko mafaera akawanda nemafolda anogona kugadziriswa uchishandisa rairo imwechete, iyo CLI inoitwa muFold Folder Eraser Pro inokwanisa kugadzirisa chete singe folda panguva. Kana akawanda mafolda akadhonzwa uye akadonhedzwa pane batch faira, maforodha mushure mekutanga haatenderwe. Kana iyo faira kana akawanda mafaera akakandwa pane batch faira, mafaera haagadzirwe.
Kuputsika kwe "byenow command mutsara sekushandiswa kwechi batch faira"
FFECmd32.exe / nzira% * / r / logfail
/ gwara% * - Mhedzisiro nzira yedhairekiti yekutanga kubviswa
/ r - dzoreredza zvinyorwa zvevana
/ logfail - danda risingabudirire faira rekubvisa kune faira regi
Semuenzaniso Batch Faira Yekukurumidza Folder Eraser Pro (bvisa .txt kuwedzera usati washandisa):
byenow Command Line Kubatsira
byenow iri yakakosha kodhi yemutsara chishandiso chakagadzirirwa kunyatso kudzima mafaera uye madhairekitori pasi pechimwe dura. Inoshandisa nzira dzinoverengeka dzisina kuwanikwa kune mamwe maturusi ekudzimisa uye kugadzirisa iwo maitiro ekubvisa akadai se: (1) kupa zvakakosha, asi kwete verbose, kugadzirisa ruzivo, (2) sarudzo yekumanikidza kusimbisa, (3) kushandisa zvese zviripo zveCPU cores nekukasira, uye (4) sarudzo yekushandisa iyo NtDeleteFile API panzvimbo yeiyo yakajairwa kudzima maitiro.DeleteFile API) kudzima mafaera. Iyo NtDeleteFile API inokurumidza nekuti inongoda imwe chete syscall pachinzvimbo chemasera matatu anodikanwa neiyo DeleteFile API yakajairwa. byenow zvakare inoratidza iyo nguva inodikanwa yekubvisa maitiro paunenge wapedza. Pazasi pane pfupiso rondedzero yesenow's's user inogadziriswa sarudzo:
tarisa iyo nhamba mafaera uye mafolda kubviswa
seta huwandu hweshinda (inoshandisa nhamba yakafanana yehombodo seCCU cores nekukasira)
ratidza kufambira mberi pane mumwe mutsara
yakagadziriswa kubviswa - scan folda 1st uye wozodzima
shandisa NtDeleteFile API panzvimbo peiyo default DeleteFile API
byenow Command mutsara uye Batch Faira
Nekuti Byenow yakatogadziriswa faira rekudzima faira uchishandisa marongero ayo, uye zvarinosarudza zvinogadziriswa kubva kumutsara wekuraira, chete yakakosha batch faira inofanirwa kutanga chirongwa muyairo yekuraira. Mafaira maviri ebhagi anopiwa, imwe ine magadzirirwo uye imwe ichishandisa NtDeleteFile API. Nekuti Byenow mutsara wekurayira chirongwa chete, ive shuwa yekuisa nzira ye byenow mune batch mafaera.
Kuputswa kweyenow command line (ine NtDeleteFile API sarudzo):
byenow "% ~ 1" -delete-ntapi
-Delete-ntapi - shandisa NtDeleteFile API panzvimbo ye DeleteFile API
Semuenzaniso Batch Files yeyenow (bvisa .txt kuwedzera usati washandisa):
Batch faira Bhenji
Iwo ma batch mafaera akafananidzwa nekumabhenji iwo vachishandisa yakajairwa Windows kubvisa maitiro seyero yekutanga. Zvipfumbamwe zvakafanana bvunzo madhairekitori akagadzirwa, rimwe nerimwe riine mafaera 12255 mumadhorobha e1599, uye anokwana 1658MBs. Imwe neimwe batch faira yakaiswa nguva ichishandisa timer uye / kana kushandisa iyo nguva yakatemwa pazvakakodzera kuyera kuti zvakatora nguva yakareba sei kuti vadzime dhairekitori rekuyedza.
Batch faira Mhedzisiro (min: secs)
Dele_file_folder_fast_simple_robocopy_v2.bat 0: 26
Dele_files_folders_fast_robocopy_silent_v3.bat 0: 31
Dele_file_folder_fast_simple_v2.bat 0: 32
Dele_files_folders_fast_v2.bat 0: 34
Fastcopy_delete_file_folders_v1.bat (simbisa) 0: 37
Fastcopy_delete_file_folders_v1.bat (hapana simbisa) 0: 40
FastFolderEraserPro_delete_file_folders.bat 0: 44
Dele_files_folders_fast_robocopy_v3.bat 0: 49
Windows Kubvisa Kwakakwana kuDzorerazve Bin * 1: 57
* Nguva inosanganisira 0:40 secs yekutumira iyo dhairekitori rekuyedza kuRecy Bin uye 1 min uye 17 secs kuburutsa Recycle Bin (0:40 + 1:17 = 1:57).
Mazhinji ezvekuraira tambo maturu akaedzwa aikurumidza kupfuura kushandisa Windows standard bvisa, kunyanya kana nguva yaida kuburitsa Recycle Bin yaisanganisira. Iwo anonyanya kukurumidza kuraira maturu maturu aive akapetwa kaviri nekukasira seiyo Windows standard kudzima maitiro anotumira mafaera kuRabyre Bin, uye kanopfuura ka4 nekukurumidza kupfuura Windows apo nguva yaida kuburitsa Recycle Bin yakaiswa mukati. Kudzvinyirira kuburitsa uye kuremadza kutema matanda kwakabatsira kusimudzira mashandiro emidziyo yetambo yekuraira, asi chakanyanya kukosha chinoratidzika kunge ndechekuti ese ekuraira maturusi maturu anodzima mafaera uye haadaro. shandisa iyo Recycle Bin. Iyo bvunzo inoratidza kuti chero chirongwa chinobvisa zvakananga mafaera chinobva chaita sechikurumidza kana tichienzanisa chizere Windows standard yekudzima maitiro, kunyangwe kana ivo vachinonoka kupfuura iyo nguva Windows zvinotora kungotumira mafaera akadzimwa ku Recycle Bin.
Iwo mabhuku ekuongorora anoshandiswa haanyatsomiririra "chaicho nyika" mamiriro sezvo iwo akange ari madiki, uye vashandisi vazhinji havafanire kushandisa nyanzvi dzekudzima maturusi kuti pane dzimwe nguva kudzima madhairekitori asingapfuuri matatu ma GB. Kunyangwe ichibatsira seyakanyanya kufungidzira, chiyedzo chaicho chingave kuyedza akasiyana-siyana batch mairairo uchishandisa rakakura uye rakaomarara dhairekitori dhizaini pamwe 3 GBs kana kupfuura.
Chii Chiri Mbiri yebhuruu Arrows Icon Pamafiles & Mafolda Mukati Windows 10
Chii chinonzi Batch mafaera ari Windows? Kufara uye kupora Batch mafaira manomano
Filed Under: 0x80070570 강제 삭제